ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: ကယား၊ ကယန်း၊ ကရင်နီ
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: ကျွန်မချစ်တဲ့ လောဓလေး, ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်
(ကျွန်မတို့ရွာထဲက ကယားလူမျိုးတွေက အဲလို ၀တ်ကြတယ်)
ပုထုဇဉ်: မ s0wha1 ရေ... ကယား ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ဘယ်လို ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာ သိရင် နည်း၂ပြောပြပါလား၊ ကရင်နီလို့ ခေါ်ရာကနေ၊ အစိုးရက ကယားပြည်နယ် လုပ်လိုက်တော့ အဲဒီ ကယားဆိုတဲ့စကား ဘယ်ကရသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
ကလိုစေးထူး: ကိုပုပြောတဲ့ ပို့စ်ကို မြန်မြန်ရေးပေးပါဗျို့။ (second လိုက်ပြီး ချောက်တွန်းမှ)
ပုထုဇဉ်: ကစေးထူးကြီးနော... ချောက်တွန်းတာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ကရင်နီဆိုပြီး ရေး၂ ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ အခုတလော ဖတ်မိတာများလို့ သတိရသွားလို့ လာမေးတာပါ။ ကရင်တွေနဲ့ နီးစပ်လို့ ကရင်၊ ၀တ်တဲ့ဝတ်စုံးကနီလို့ နီ၊ အဲတော့ကရင်နီ
ပုထုဇဉ်: ဒါဆို ကယားကျတော့ကော၊ tribe တစ်ခုရဲ့ နာမည်လား၊ အစိုးရက ဘာ့ကြောင့် 'အပင်ပန်းခံ' ပြီးပြောင်းသလဲ။ သိချင်လို့ စပ်စုကြည့်တာပါ။
shout box မှာ ကိုပုထုဇဉ်နဲ့ ကိုကြီးစေးထူးတို့ အပြိုင်အဆိုင် ကျွန်မကို ချောက်တွန်းထားတဲ့ အဲ မှားလို့ မေးထားကြတဲ့ ကယားနဲ့ ကရင်နီ ကွာခြားချက်လေးကို ကျွန်မ ခေါင်းပူအောင် မေးမြန်း စုံစမ်းပြီးသကာလ ဒီပို့်စ်လေးကို ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်မ သိထားတာကတော့ ကျွန်မတို့ရွာ ပဒေါင်ကုန်းမှာ နေကြတဲ့သူတွေကို ကယားလို့ ခေါ်ကြတာပါပဲ။ သူတို့တွေက ယောက်ျားတွေက ဘာမှ ထူးခြားချက်မရှိပေမဲ့ မိန်းမတွေကတော့ ခြေသလုံးမှာ ကွင်းအမည်းတွေကို အပြည့်ဝတ်ကြတယ်။ ကျွန်မအထင် ပဒေါင်လူမျိုးတွေလို အသက် ၁နှစ်ကို လည်ပင်းမှာ စွပ်တဲ့ကွင်း တကွင်းတိုးသလိုမျိုး၊ ကျွန်မတို့ရွာက ကယားတွေကလည်း ခြေသလုံးမှာ အသက် ၁ နှစ် ၁ကွင်းတိုး ၀တ်ကြတာပါပဲ။ သူတို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကယားလူမျိုးလို့ပဲ သုံးနှုန်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုပုထုဇဉ်အမေးကို ကျွန်မသိသလို ပြန်ဖြေရရင် ကယားဆိုတဲ့စကားဟာ အဲဒီဒေသမှာ အစကတည်းကရှိတဲ့ လူမျိုးကွဲတွေထဲက လူမျိုးတမျိုးနာမည်ပါ။
လောပိတမှာ ကျွန်မတို့လိုပဲ အနေကြာလာတဲ့ အစ်ကိုတယောက်ကတော့ ဒီလိုပြောပါတယ်။ ကယား၊ ကရင်နီ၊ ကယန်းဆိုတာ ကယားပြည်နယ်ထဲက လူမျိုးကွဲတွေပါတဲ့။ ကရင်မှာ စကောကရင် နဲ့ ပိုးကရင် ဆိုပြီး ကွဲပြားသလိုမျိုးပဲလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ လူမျိုးကို ကယားလို့ခေါ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ နီးတဲ့ ဒေသက လူမျိုးကို ကရင်နီလို့ ခေါ်တာပါတဲ့။ ကရင်နီက သူတို့ကို ကယားပြောရင် မကြိုက်သလို၊ ကယားကလည်း သူတို့ကို ကယားလို့ပြောတာပဲ ကြိုက်ပါတယ်တဲ့။
ကယားပြည်နယ်မှာ ၂နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အန်တီခင်မင်းဇော်ကတော့ ဒီလိုပြောပါတယ်။ "ကယားလို့ ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူး။ ကရင်နီပဲ ခေါ်ရတယ်။ ဦးနေ၀င်း လက်ထက်ကတည်းက ခေါ်တာမို့တဲ့ ။ ကရင် ၂ မျိုးရှိတယ်လို့ သူတို့က ပြောတယ်။ ကရင်ဖြူ (အခုကရင်)နဲ့ သူတို့က ကရင်နီ (အခုကယား)ပေါ့။ နောက်ပြီး လည်ပင်းကြေးကွင်းစွပ်တဲ့ ပဒေါင်တွေကို ကယန်းလို့ခေါ်မှ ကြိုက်တယ်တဲ့။ ဟိုတုန်းက သူတို့ကို ရှမ်းလူမျိုးတွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့ချိန်က ပတ်တောင်း(ကြေးပတ်တဲ့လူမျိုး)လို့ နှိမ်ခေါ်တာမို့လို့တဲ့။
http://www.wikipedia.org/ မှာတော့ ဒီလိုမျိုးရှင်းထားပါတယ်...
Karenni, also known as Red Karen or Kayah, areaSino-Tibetan people, living mostly in Kayah State of Myanmar. Karen-Ni was the country of the Red Karens,acollection of small states, formerly independent, but was the feudatory to Burma (now Myanmar).
Demographics Ethnographers classify anywhere from seven to ten ethnic groups (not including ethnic sub-groups) as native to Kayah State. In addition, Shan, Intha, and Bamar live in the north and Pa-O in surrounding hills. Each group is also known by more than one name. Clearly, ethnicity in Kayah State isacomplex issue, made more complex by the current political situation. According to the 1983 census conducted by and the Burmese government, the Kayah composed 56.12%, while Bamar (17.58%), Shan(16.66%), Karen (6.45%), mixed races (2.08%), and other groups formed minorities. Ethnolinguists distinguish the following linguistic groups in Kayah State
The Karenni States is the name formerly given to the three states of Kantarawadi (3161 square miles, pop (1931) 30,677), Kyebogyi (790 square miles, pop (1931) 14,282) and Bawlake (568 square miles, pop (1931) 13,802),located south of the Federated Shan States and east of British Burma.The British government recognized and guaranteed the independence of the Karenni States in an treaty with Burmese King, by which both parties recognized the area as belonging neither to Burma nor to Great Britain. Consequently, the Karenni States were never fully incorporated into British Burma. The Karenni States were recognized as tributary to British Burma in 1892, when their rulers agreed to acceptastipend from the British government. In the 1930s, the Mawchi Mine in Bawlake was the most important source of in the world. The Constitution of the Union of Burma in 1947 proclaimed that the three Karenni States be amalgamated intoasingle constituent state of the union, called Karenni State. It also provided for the possibility of succession from the Union after 10 years. In 1952, the former state of Mong Pai was added, and the whole renamed Kayah State possibly with the intent of drivingawedge between the Karenni and the Karen both of whom were by now fighting for independence.
ကယားဟုခေါ်ပုံ>>> ၀တ်ဆင်သောအ၀တ်အထည်တို့၏ နီသောအရောင်အသွေးကိုလိုက်၍ မြန်မာတို့က ကယားပြည်နယ်သားတို့ကို ရှေးအခါက ကရင်နီဟု ခေါ်ကြသည်။ သူတို့ကမူ မိမိတို့ကိုယ်ကို ကယား သို့မဟုတ် ကယားလိဟု ခေါ်ဝေါ် ကြသည်။ ကယား ဟူသောဝေါဟာရမှာ သူတို့ဘာသာအရ လူ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၍ ကယားလိ ဟူသောဝေါဟာရမှာ လူနီ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကွင်းကရင်တို့ကမူ သူတို့အား အရှေ့စွန်းကရင်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော ဘွဲမနော ဟူသော အမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ကရင်နီမှ ကယားသို့>>> ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲစည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ကရင်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းသောအခါ၌ ကရင်နီပြည်နယ်ကို ထည့်သွင်းရန် ရည်မှန်းချက်ရှိသည်ဖြစ်ရာ ထိုသို့ ထည့်သွင်းခြင်းကို မလိုလားကြသောကြောင့် တကြောင်း၊ ကရင်နီအမျိုးသားတို့သည် ကရင်နီဟူသော အမည်မှ ကယားဟူသော အမည်သို့ ပြောင်းလွှဲရန် ကြိုးစားခဲ့ကြရာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်အတွင်းက ထိုအမည်ပြောင်းလွှဲရေးနှင့် ကယားပြည်နယ် သီးသန့်တည်ရှိရေးတို့အတွက် ပါလီမန်မှ အက်ဥပဒေပြုကာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် လိုအပ်သောပုဒ်မများကို ပြင်ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း (စာ-၇၃)
ဂူဂယ် wikipedia ကနေရှာထားတဲ့ အချက်အလက်အချို့၊ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း နဲ့ ကျွန်မစုံစမ်းသိရသလောက် (ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ ကယားပြည်က သူငယ်ချင်းအများစုနဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး လိုက်မေးပေမဲ့ သေချာမသိဘူးဆိုတဲ့ လူကများတယ်...)ကို ရေးသားထားတာပါ... အချက်အလက် တစုံတရာမှားယွင်းမှုရှိခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်... ဒီထက်ပိုပြီး တိတိကျကျ သိတဲ့လူများရှိရင်လည်း ကွန်မန့်ထဲရေးပြီး ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောပေးသွားကြပါရှင်...။
ကိုပုထုရေ...ကျေနပ်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ညီမလည်း ဒီလောက်ပဲ တတ်နိုင်တယ်...ဟီး
မမေဓာဝီ၊ အန်တီခင်မင်းဇော်၊ ကိုAKKT၊ ကိုကြီးနဲ့ ကိုမင်းတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း...
ရေးပြီးချိန်: 6/24/2007 10:17:00 AM
တကယ့်ကို ကြိုးကြိုးစားစား ရေးထားတာပဲ။
ပြီးတော့ တကယ် သိသင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ။
ဟုတ်တယ် ညီမလေး ...
ညီမလေးရဲ့ ကြိုးစားမှုကို လေးစားပါတယ်။
ပုံလေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသွားရော။
မေးသူကိုပုထုဇဉ်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ် ... သူမေးလို့ ညီမလေး ဖြေဖြစ်တာဆိုတော့လေ .. ဖြေသူကိုတော့ အထူးပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့။
ကြားထဲက ချောက်တွန်းသူတော့ မပါဘူးနော် ... :P
ပုထုဇဉ်: နှံ့စပ်ပါပေတယ်ဗျာ၊ ကျေးဇူးအထူးပဲဗျို့၊ ကယား၊ ကယန်း၊ ကရင်နီ၊ လူမျိုးတော်တော် စုံတဲ့ မြန်မာပြည်ပါပဲ။ မ s0wha1 ကို ကူညီပေးသူ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ်။ တော်တော်အားစိုက်ထုတ်ထားတာပါ။ ကျနော်သိသလောက်လေးတော့ ၀င်ဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်။ မှန်တယ်၊ မမှန်တယ်တော့မသိပါ၊ ကယန်းတွေက မျိုးကွဲ ၆မျိုးရှိတယ်။ ဂေခို၊ ဂေဗား၊ လာထ၊ ကယော၊ ပဒေါင်၊ ကယန်းကငံ ပါ။ အားလုံးကို အရှေ့မှာ ကယန်းတပ်ပြီး ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျနော် ကယန်းဒေသထဲ ရောက်တုန်းက ခရစ်ယာန် သာသနာပြု မစ်ရှင်က ထုတ်ထားတဲ့ စာတမ်းတခုမှာ ဖတ်ဖူးတာပါ။ စာတမ်းနာမည်တော့ မေ့နေပါပြီ။
ဒါမျိုး စာလေးတွေဟာ ကိုပုတို့ မမေးလည်း သိရင် ရေးထိုက်တဲ့ အရာတွေပါ။ မေးလိုက်တဲ့သူရော ရေးလိုက်တဲ့ သူရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယိုးဒယားရောက်တုန်းက ပဒေါင်လူမျိုးတွေကို ယိုးဒယား ခရီးသွားကြေညာထဲမှာ၊ မသိရင် သူတို့ လူမျိုးလိုလိုဘာလိုလို ရောပြီး ကြေညာသွားတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
24 Jun 07, 19:04
ချိုကို: ရေးဖြစ်အောင် ခြောက်ချသောသူများလည်း ကျေးဇူးပါ။ :P
24 Jun 07, 19:03
ချိုကို: မမရေ ပရိသတ်တွေများပါ့။ ကယား၊ ကယန်း၊ ကရင်နီအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကယန်း(ပဒေါင်)လူမျိုးနဲ့ ကယားလူမျိုးဆိုတာ- မျိုးနွယ်စု တခုတည်း ပြောလို့ရပေမယ့် စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုက တခြားစီပါ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မတူခြားမှုများကို အပြန်အလှန် လက်သင့်ခံဖို့ လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
www.mu-group.blogspot.com, မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။